हरेक आत्मसम्मानी व्यक्ति आफ्नो अलमारीमा शर्ट छ, तर सबैले उनीहरूको हेरचाह गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, हरेक सज्जनले कसरी शर्टलाई लोहाउन सक्दैन! कुनै पनि प्रक्रियाको रूपमा, इस्त्री गर्ने एल्गोरिदम छ जुन मैले अब वर्णन गर्दछु। शर्ट इस्त्री गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो कि पहिलो सानो भागहरू इस्लाम, र त्यसपछि मात्र ठूला हुन्छन्। तपाईं कमीज लोहा गर्नु अघि, तपाईं एक कार्यस्थल तयार गर्न आवश्यक छ। आदर्श रूप मा, यो एक अपरिचित, फ्लैट सतह संग एक राम्रो इस्त्री बोर्ड हो । अन्तिम रिसोर्टको रूपमा, टेबल ठूलो स्नान तौलियासँग राखिएको तालिका पनि उपयुक्त छ। गुणस्तर इस्त्रीको लागि फलाम भाप जनरेटरको साथमा लैजानुपर्छ (यो ताप्लेजुङको तापक्रममा छेदको माध्यमबाट बटन थिचेर भापको समान प्रवाह उत्पन्न गर्दछ, र नलिकाको माध्यमबाट उड्ने भाप बन्डल होइन)। यदि घरमा यस्तो कुनै लोहे छैन भने सामान्यतया घरको प्रयोग गर्नुहोस्, तथापि निश्चित गर्नुहोस् कि यो एक गैर-छडी कोटिंग संग हो। लोहा गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका चीजलाई अचम्म लाग्दछ, जब तिनीहरू अझै सानो ढोका हुन्छन्। यद्यपि, यदि तपाईं पहिले नै ढिलो हुनुहुन्छ र चीज पूरै सुकेको छ भने, तपाइँ यसलाई नरम पार्नु पर्छ। यो गर्न, तपाईं शर्ट लोहा गर्नु अघि, यसलाई पानी संग छिराउनुहोस् र एक मिनेटमा एक मिनेट को लागि राख्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि पानीको साथ स्प्रेक गर्दा जब विशेष ध्यानले कमीजको आस्तीनको प्रशोधन गर्दछ। त्यसोभए, कार्यस्थल तयार छ, शर्टमा नरम हुन्छ, अब हामी लोभलाई वांछित तापमानमा उचाल्छौं। कपासको लागि फ्याक्स 220 को लागी यो 150 डिग्री सेल्सियस हुनेछ, र ती व्यक्तिहरूको लागि जो फलाम पलिएस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेन्सरलाई 110 डिग्रीसम्म सेट गर्नुपर्छ।
त्यसोभए, हामी सिधै प्रक्रिया अगाडि बढ्छौं, तर यो भन्दा पहिले म फेरि दोहोर्याउँछु र प्रश्नलाई जवाफ दिन्छु - शर्टलाई कसरी लोभ गर्ने। सम्झनुहोस्, हामी सानो क्षेत्रको विवरणबाट लोभ सुरु गर्छौं - यी कुनै पनि मोडेल, रैक, कुनै पनि प्रकारका क्याफेहरू छन्। आयरन साझेदारी लाइनको साथ ड्राइभ गर्ने प्रयास गर्नुहोस् - त्यसपछि कपडा बढ्न सकेन। पहिलो हामी कलर, पकडने र रैकिंगलाई लुगा लगाउँदछौं। एक सानो, तर धेरै मूल्यवान चाल: रैक को किनारा को उपचार को रूप मा यो अगाडी झुकाव रहेको छ, र त्यसपछि कफ स्ट्रोक। वैसे, यस प्रक्रिया को किस प्रकार को कफ को लोहा गर्न को लागी अलग हुन सक्छ। यदि कफ सामान्य छ भने, त्यसो त पहिले तिनीहरूलाई भित्रबाट र फलाम बाहिर। तर यदि तिनीहरू कफलिन्स अन्तर्गत बनाइन्छ भने, तपाइँले कफलाई पूर्ण रूपमा लोभ गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि तिनीहरूलाई मोडा पार्नु र अगाडि भागलाई फलाम पार्नु हुनेछ।
अन्त्यमा - हामी आस्तीन अगाडि बढ्छौं। तपाईं फलाम गर्न विशेष इस्त्री बोर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईसँग कुनै पनि छैन भने, हामी एक मानक इस्त्री मिसिन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यो गर्न, आस्तीन सतहमा राख्नुहोस् ताकि सीम देख्छ। यसलाई लोहा गरौं। अब आस्तीनलाई पछाडि पार्नुहोस्, सिम साँच्चै छेउमा हुनुपर्दछ। यसलाई लोहा गरौं। हामी आस्तीन तेस्रो पटक बारी गर्छौं, अब बटन पट्टी हेर्नुपर्दछ। फेरि, स्ट्रोकिंग र फ्लोर फलाम पछि। तिनीहरू बारीमा, सावधानीपूर्वक, गुणात्मक, विध्वंसत्मक रूपमा उनीहरूलाई फलामको साथ "फ्लोटिंग" गर्नुपर्छ।
धेरै सावधानी र पालुआमापन अभ्यास गर्नुहोस्, बटनहरू बाईपास गर्दै। यो आर्महोल राम्रोसँग फलामको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ (यो स्थान जहाँ आस्तीन खोखेलसँग जोडिएको छ)। कोठरी र कलर अन्तर्गत क्षेत्रलाई फलाम गर्न नबिर्सनुहोस्। रक भुक्तानीको तल्लो तहको स्थानमा राख्नुहोस्, किनकि यसले निर्भर गर्दछ कि तपाइँ कर्टनीलाई कसरी साइजमा राख्नुहुन्छ। चेक गर्नुहोस्। यदि कलरमा विशेष जेबहरू छन् भने, प्लेटहरू घुसाउनुहोस् जसले कठोरता दिन्छ। यो सबै छ, शर्ट तपाईंको लागि यो तयार छ!
तपाईं धेरै शर्टहरू एकैचोटीमा फलाम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि उनीहरूको उचित भण्डारणको ख्याल राख्नुहुन्छ। शर्टहरू लामो समयसम्म भण्डारणमा राखिएका केही सरल नियमहरू छन्: प्रत्येक शर्टले एक विशाल अलमारीमा अलग-अलग कंधोहरूमा झुन्ड्याउँदछ, यसलाई केही खण्डमा राख्नु र धम्कीहरू खानुपर्छ। यसको लागि कंधेहरू बीचको दूरी 5-6 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ।
Moleskin कपडा: विशेषताहरू, गुणहरू र अनुप्रयोग
बोलोग्ना कपडा - सुविधाहरू, फाइदाहरू, हानिहरू
राजनीतिक प्रक्रियाहरू को प्रकार। राजनीतिक प्रक्रियाको संरचना
विवाह र ज्योतिष: मानिस-ड्रैगन अनुकूलता - महिला ड्रागन
फिल्म "स्टार वार्स": बल को गाढा पक्ष
"Aldous" - उत्कृष्ट गुणस्तर को बच्चा लुगा
इटालियन विमान। युरोप विन्डो
"Selchukhan" (टर्की) - समीक्षा
निष्कासन को अर्डर